May 2015 – Ministry of Education in Puntland
May 30, 2015 / News
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee dowlada puntland oo u mahad celisay kormeerayaashi iyo ilaaliyaashii imtixaamdka shahaadiga Qaaday.
30/May/2015- Dib ayaa waxaa ugu soo laabatay Wasaarada Waxbarashada iyo tacliinta sare kormeerayashii iyo ilaaliyashii iyagoo si geesinimo ku jirto shaqdoodii u soo gutay iyadoo u ahayd asbuucii kuluulaa inta […]
Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlada Puntland oo Caasuntay Prof Cabdi Ismaaciil Samatar
30/May/2015- Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Puntland ayaa caasuntay Prof Cabdi Ismaaciil Samatar oo inta badan ka faalooda Siyaasada soomaalia. Pof-ka oo ka yimi dalka Maraykanka ayaa Puntland u […]
Wasaaaradda waxbarashada iyo Tacliinta sare ee dowladaPuntland oo imtixaankii shahaadiga soo afmeertay.
28/May/2015-Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cali Xaaji Warsame ayaa sheegay inuu guul kusoo dhamaaday imtixaankii shahaadiga ee todobaadkaan ka socda gobolada Puntland. Wasiirka waxbarashada oo si gaar […]
Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Puntland oo kormeerkii Imtixamaadka ku Tagtay Degmada Boocame ee Gobalka Sool
28/May/2015-Wasiirka Wasaarada Waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland Dr.Cali Xaaji Warsame iyo wafdi la socday ayaa subaxnimadii hore ee saakay booqday degmada Boocame ee Gobalka Sool waxaana uu ugu kuur galayey […]
Wasaarada waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada Puntland oo kulan la qaadatay saraakiil ka socda UNDP
Wasaaradda Waxbarashadda iyo Tacliinta Sare ee Puntland oo Kormeer ku maray Iskuulo ku yaala Gobolada Nugaal iyo Karkaar
Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Puntland oo guul u rajeeyey ardayda Imtixaanka u fariisatay.
Wasiir – kuxigeenka Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta Sare oo sheegay in uu guul ku soo dhamaaday furitaanka Imtixaanka Shahaadiga ah ee Puntland.
Madaxwaynaha Dawlada Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka furay Imtixamadkii shahaadiga aha Dugsi sare Boosaso public.
Wasaaradda Waxbarashadda iyo Tacliinta sare ee dowlada Puntland oo daahfuray Imtixaanka Shihaadiga ah ee Puntland.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare oo Imtixaamadkii Shihaadiga ahaa oo maanta Gobaladda Puntland u kala Dirtay.
Macalimiin ka qalin jabiyay Kuliyadda tababarka Macalimiinta Puntland ee GTEC.
Wasaaadda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowladda Puntland oo Jaamacado ka hirgelisay Adeega E-Library (eGranary)
Wasaaradda waxbarashada Puntland oo si weyn ula dardaarantay howlwadeenada qaadidoona imtixaanka shahaadiga.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowladda Puntland oo gudoonsiisay Shahaadooyin 150 Arday oo ka qalan jabisay Dugsiga Farsamada Gacanta ee Garowe.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Ee dowladda Puntland oo tababar u qabatay macalimiinta dugsiyada sare.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Taclinta Sare oo Imtixaamadkii sanad- dugsiyeedka naqliga aha soo gabagabeysay.
Wasaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada Puntland oo ic-laamisay xilliga Imtixaamka Shihaadiga la qaadayo.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare oo Qabatay Dib- u eegidda Mashruuc Waxbarashadda Gabdhaha.
Madbacadda Wasaaradda Waxbarasahda iyo Tacliinta sare oo Buugaag kor u dhaafaya 23-kun oo buug u daabacday, kuna wareejisay Hay’adaha Save the children iyo NRC.